ကိုယ်နဲ့ အခြားသူတွေ အားလုံး ဘေးကင်းစေဖို့ ပုံမှန် ပိုးသတ်ပေးသင့်တဲ့ အိမ်အပြင်က နေရာတွေ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုတဲ့ ရောဂါက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက စိတ်ကူးနဲ့တောင် မတွေးဖူးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ လူသားတွေရဲ့ ဘဝကို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေ၊ လေထုထဲကနေ၊ ပိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက တစ်ချို့ မျက်နှာပြင်တွေမှာဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်က နာရီအတော်ကြာ ရှင်သန် နေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း များတဲ့နေရာတွေကိုသွားရင် ကူးစက်နိုင်ခြေ မြင့်မားသလိုပဲ လူတွေအများကြီးနဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့မှု ပိုရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ ထိတွေ့မိရင်လည်း အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။
လက်ကို ခဏခဏ ဆေးတာ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေတာ အစရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေက ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလိုပဲ အများပြည်သူ သွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာ ပုံမှန် ပိုးသတ်၊ သန့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုတာလည်း လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ တာဝန်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေထဲမှာ လူပေါင်းစုံ လာနိုင်ပြီး နာရီအနည်းငယ်အတွင်း မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းကို လူတိုင်းထိတွေ့သွားနိုင်တာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – ရုံးခန်း၊ ဈေးဆိုင်၊ ကျောင်း၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ၊ အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အများပြည်သူသုံး အဆောက်အအုံနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ လိုမျိုးပေါ့။
အထူးသဖြင့်တော့ လူပေါင်းစုံနဲ့ နေ့တိုင်း အကြိမ်ရေများစွာ ထိတွေ့နေရတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့၊ ပိုးသတ်ပေးဖို့ ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ တံခါးလက်ကိုင်တွေ၊ လျှောက်လမ်းနဲ့ လှေကား လက်ရမ်းတွေ၊ အလုပ်နေရာ၊ ရေခဲသေတ္တာ လက်ကိုင်၊ ဘဏ်ကတ် ဒါမှမဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ် ထည့်တဲ့စက်တွေ၊ ဖုန်းနဲ့ ကီးဘုတ်တွေအပြင် အိမ်သာ၊ ရေပိုက်ခေါင်း၊ ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတောင် အနည်းငယ်ပဲ ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ အများပြည်သူအနေနဲ့ ဒီလိုမျက်နှာပြင်တွေနဲ့ မလွှဲမရှောင်သာ ထိတွေ့နေရဦးမယ်ဆိုရင် ဒီလို အများသုံးနေရာတွေကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက် အသုံးပြုပြီးတိုင်း သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပိုးသတ်တာတွေ လုပ်ပေးဖို့ ပိုင်ရှင်တွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မကြာခဏ ထိတွေ့နေရတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ပိုးသတ်ဖို့ ဘာကို အသုံးပြုသင့်လဲ?
WizAct 24 နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ WizAct 24 က နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မျက်နှာပြင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး တစ်ချက်ဖြန်းလိုက်ရုံနဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ၉၉.၉% သေစေနိုင်ပါတယ်။ ဖြန်းပြီးသွားရင်လည်း WizAct 24 ရဲ့ ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းက အဲဒီ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်လို့ လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ထပ်ပြီး ထိတွေ့ပါစေ (၂၄) နာရီလုံး ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ WizAct 24 ကို ကလေးတွေ ဆော့ကစားတဲ့ နေရာ၊ အလုပ်နေရာ၊ ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်လိုမျိုး ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာတွေ၊ အစားအသောက် တည်ခင်းတဲ့နေရာစတဲ့ အိမ်အပြင်ဘက်က နေရာမျိုးစုံက ဘယ်လို မျက်နှာပြင်တွေကိုမဆို ပိုးသတ်သန့်ရှင်းဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၂၄ နာရီကြာ ပိုးသတ်ထားဖို့ – WizAct 24 ကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့ ၁၅-၂၀ စင်တီမီတာ အကွာလောက်ကနေ ခပ်ရွှဲရွှဲ ဖြန်းပါ။ (၅) မိနစ်ခန့် အခြောက်ခံထားပြီး အဝတ်သန့်သန့် တစ်ခုနဲ့ ဆေးတွေ ညီညီညာညာ ပျံ့သွားအောင် သုတ်လိုက်ပါ။
ပုံမှန် ပိုးသတ်သန့်ရှင်းဖို့ – WizAct 24 ကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့ ၁၅-၂၀ စင်တီမီတာ အကွာလောက်ကနေ ခပ်ရွှဲရွှဲ ဖြန်းပါ။ (၆၀) စက္ကန့်လောက် အခြောက်ခံထားပြီး အဝတ်သန့်သန့်နဲ့ သုတ်လိုက်ပါ။
WizAct 24 က တခြားသာမန် ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ မတူဘူးဆိုတာ သိပါလား? မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာ WizAct 24 ဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ချက်ဖြန်းလိုက်ရုံနဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ၉၉.၉% သေစေနိုင်တဲ့အပြင် WizAct 24 ရဲ့ ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းက အဲဒီ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်လို့ လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ထပ်ပြီး ထိတွေ့ပါစေ (၂၄) နာရီလုံး ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့၊ ဈေးဝယ်စင်တာက တွန်းလှည်းတို့မှာ ရှိတဲ့ လက်ကိုင်တွေ၊ လက်တန်းတွေလိုမျိုး လူတွေနဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့နေရတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ကိုင်တွယ်ခါနီးတိုင်း WizAct 24 အိတ်ဆောင် ပိုးသတ်ဖြန်းဆေးဘူး ဒါမှမဟုတ် WizAct 24 ပိုးသတ်ပဝါကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ WizAct 24 ကို 450ml အရွယ်အစားနဲ့ နီးစပ်ရာ စတိုးဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 450ml အရွယ် ဘူးတစ်ဘူးကို အကြိမ် (၇၀၀) လောက်အထိ ဖြန်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘူးချင်း ဈေးကတော့ မြန်မာငွေ (၄၂၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ WizAct 24 ကို အိပ်ဆောင်ပိုးသတ်ဖြန်းဆေးဘူး (18ml) ကို မြန်မာငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး WizAct 24 ပိုးသတ်ပဝါ (၁၀) ခုပါ တစ်ထုပ်ကို မြန်မာငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင် ပါတယ်။
WizAct 24 ကို Myanmar Distribution Group ကနေ တင်သွင်းဖြန့်ချိတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ အရောင်းတာဝန်ခံ ရုံးခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ ရုံးခွဲတွေရဲ့ တည်နေရာတွေကို www.myanmardistributiongroup.com မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 အကြောင်း အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းချင်ရင်တော့ ဖုန်း – ၀၁ ၄၀၀၅၃၃ ၊ ၀၁ ၄၀၀၅၄၄ နဲ့ အီးမေးလ် – info@mdgmyanmar.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
WizAct 24 အကြောင်းနဲ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးဖို့ အွန်လိုင်းကနေ အော်ဒါတင်ချင်ရင် www.facebook.com/WizAct24Myanmar မှာလည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။